Mabhuku mashanu ane mukurumbira akanyorwa mutirongo | Zvazvino Zvinyorwa
Iye munyori inyanzvi asi zvakare anofunga uye, dzimwe nguva, muratidziri, muzivi uye kunyange wezvematongerwo enyika. Uye kunyangwe zvisingaiti zvakanyanya kuitika nhasi, munguva yakapfuura munyori anga aine mukana uri nani kwazvo wekuzopedzisira ave kuseri kwemabhawa kana izvo zvaainyora nezvazvo zvaisada echelons dzepamusoro, pakati pezvimwe zvikonzero. Nekuda kweawa ese maawa mutirongo maive nenguva yakakwana yekufungisisa uye pamwe kupuruzira kupenga nezvigunwe, izvi Mabhuku mashanu ane mukurumbira akanyorwa mutirongo.
1 Don Quixote de la Mancha, naMiguel de Cervantes
2 De Profundis, naOscar Wilde
3 Mein Kampt, naAdolf Hitler
4 Rwiyo rwiyo uye mabhalla ekusavapo, naMiguel Hernández
5 Dhiabhorosi paMuchinjikwa, naNgũgĩ wa Thiong'o
Basa repasi rese remabhuku edu rakaburitswa muna 1605 naMiguel de Cervantes, uyo aishanda pakati pemakore 1594 na1597 semuteresi. Nekudaro, kumwe kusarongeka munhoroondo dzake kwakatungamira zviremera kuvhara iye muSeville Jeri, kwaakagara mwedzi mitatu. Makore gare gare, chirevo chebasa rake rine mukurumbira chingataura kusikwa kwaDon Quixote mujeri rakadaiKunyangwe zvisati zvichizivikanwa kuti yaivepo here iyo yakatanga kunyorwa kana kuti yakangozvarwa sepfungwa.
Mushure mekunakidzwa mukurumbira wenyika uye wekunze, Wilde akawira mumaoko aIshe Aldred Douglas, mwanakomana waMarquis weQueensberry, uyo akafunga kushambadzira kudanana pakati pevarume vaviri munguva yeVictorian umo sodomy yaive ichiri mhosva. Kubva kuJereji yekuverenga, Wilde akanyora tsamba iyi iyo, sezita rayo reInd, inomiririra rwendo rwekutanga nemunyori muchimiro chetsamba kune aimbova mudiwa waakakumbira ruregerero pamusoro pehunhu hwake. Kunyangwe yakanyorwa muna 1897, yakaburitswa mushure mekufa kwaWilde.
Mein Kampt, naAdolf Hitler
Imwe ye mabhuku ane nharo zvikuru munhoroondo Yakatanga kunyorwa muna 1924 naiye Führer panguva yekugara kwake mujeri reLandsberg, kwaaishumira mutongo wemakore mashanu mutirongo mushure mekukundikana kwemubatanidzwa muMunich. Kuburikidza nemapeji e Kurwira kwangu, Hitler akazvizivisa sa Ermbermensch (kana Superman), akataura nezvekukosha kwekuwana nzvimbo kubva kuRussia uye akaruramiswa dzidziso yevakachenjera veZiyoni, iyo yaidzivirira rangano yechiJuda yaizopedzisira yatora nyika. Mifungo yaizoendesa kune yake yezvematongerwo enyika ane mukurumbira makore akazotevera, kunyangwe bhuku iri rikave nyama yekudzivirira kusvikira Germany yasarudza kuibudisazve pakutanga kwegore ra2016, ichiva mutengesi..
Rwiyo rwiyo uye mabhalla ekusavapo, naMiguel Hernández
Mushure mekupera kweHondo yeVanhu, nhengo dzeRepublican divi dzakagoverwa nemajeri akasiyana enyika yedu, kusanganisira Miguel Hernández. Pakati pezvipenga zvemajeri akasiyana maakange ari, nyanduri aizoenderera mberi nekunyorwa kwebhuku renziyo uye mabhaladhi ekusavapo umo murume wechidiki akaongorora hudiki hwake uye kusava nemhosva, mamiriro evarume vemazuva ano uye mamiriro ezvinhu akashata emukadzi kune uyo akanyora mukurumbira Onion nanas. Basa rakasiiwa risina kupera mushure mekufa kwanyanduri muAlicante munaKurume 28, 1942.
Dhiabhorosi paMuchinjikwa, naNgũgĩ wa Thiong'o
Mushure mekunyora muna 1977 Ngaahika ndeenda, mutambo uyo waizobatsira kumutsiridza nharaunda inoyevedza yekumaruwa eKenya, Thiong'o akavharirwa mutirongo kwegore rekushinga kupokana nekolonialism yakaratidzirwa zvakare muchimiro chetsika tsika. Pakati pemwedzi yake ari mutirongo, uye sechombo kurwisa vaurayi, munyori akanyora bhuku rake rekutanga muchiGikuyu, mutauro wake wekuzvarwa: Caitaani Mutharabaini (Dhiyabhorosi pamuchinjikwa). Akazviita pabepa repachimbuzi retirongo, gobvu uye rakaomarara zvakakwana kutsigira inki, kunyangwe dai vavariro dzemusungwa dzainge dzakasiyana.
Izvi 5 mabhuku ane mukurumbira akanyorwa kubva mutirongo ivo vanounganidza mazano, manzwiro uye pfungwa dzevamwe vanyori vakatora mukana wemaawa avo mazhinji kuseri kwemazariro kuti vaburitse fungidziro yavaizokwanisa kuisa papepa makore (uye kunyangwe makumi emakore) gare gare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku mashanu ane mukurumbira akanyorwa mutirongo
Ana Gelman akadaro
Ndinokurudzira kuverenga inoverengeka "Mujeri" naRicardo Elías
Pindura Ana Gelman
Iyo Ipfupi Édition yekutsikisa imba uye yayo ipfupi nyaya yekutengesa michina